Transfer Music, SMS, Photos, Video iyo Xiriirada ka HTC si dhakhso ah iPhone
1 Transfer si iPhone
1.1 Samsung si iPhone
1.2 Sony si iPhone
1.3 Android inay iPhone
1.4 iPad si iPhone
1.5 Mac si iPhone
1.6 HTC si iPhone
1.7 iPhone si iPhone
1.8 Lugood si iPhone
2 Transfer in Android
2.1 Android inay Android
2.2 BlackBerry in Android
2.3 Lugood in Android
2.4 Nokia in Android
2.5 iPhone in Android
2.6 iPod in Android
2.7 iCloud in Android
2.8 BlackBerry in Samsung
Waxaad soo qaado cusub iPhone oo kaliya in ay ogaadaan in dhammaan macluumaadka ayaa weli ku saabsan jir phone HTC. Ma waxaad tahay hoos ku bulaacadahooda markuu u dhacdaa? Waa hagaag, hadda halkan yimaado hab lagu qanco. Waxa aad u baahan yahay HTC ah in iPhone qalab kala iibsiga in aad ka samata-bixiyaan shaqada culus ee suuqa kala iibsiga xogta ka phone HTC iyo kiniin si iPhone. Wondershare MobileTrans ama Bixineyso Sidii jeer waxay u baahan tahay. Sidaa daraadeed, waxa aad awoodi kartaa inaad u guurto xiriirada, music, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, videos iyo sawiro ka HTC in ay si degdeg ah iPhone iyo si fudud.
Qeybta 1: Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Music, Photos, Video, Calendar iyo Xiriirada ka HTC si iPhone
Qeybta 2: Talooyin Qaar ka mid ah si ay u gudbiyaan Apps si iPhone
Qeybta 3: Sida loo Maamul iPhone ka dib markii suuqa kala iibsiga
HTC si iPhone Transfer, Quick, Simple & Safe
HTC ayaa barnaamijka kala iibsiga iPhone loo isticmaalaa in lagu caawiyo in aad wareejiso music, xiriirada, SMS, sawiro, jadwalka iyo video ka HTC si iPhone dhib la'aan.
Xiriirada Transfer ka HTC si iPhone (macruufka 9 taageeray), iyadoo horyaalka shaqo, magaca shirkada iyo faahfaahin dheeraad ah.
Copy dhamaan fariimaha Calendar iyo qoraalka ah ee aad taleefan HTC si iPhone.
Beddelaan video iyo maqal ah si iPhone qaab socon - MP3 / MP4.
Demi albums iyo sawiro ka HTC si iPhone, si meel kasta oo aad iyaga ka arki kartaa.
Taageero qalab badan HTC iPhone, oo ay ku jiraan iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, HTC Mid ka mid ah X, iyo HTC ugaar.
Daaleen wareejinta yar xogta by yar. Hadda, iyadoo click hal, kuu soo gudbin karaa oo dhan ka HTC si iPhone.
Ma ahan oo keliya Transfer Xiriir
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso badan xiriirada. Taasi waa, inay awoodaan inay nuqul ka music, video, sawiro, jadwalka iyo SMS aad tahay qof aad.
Waxba ma ahan marka aad files ka HTC dhaqaaqo iPhone la side la mid ah ama ka duwan (s). Waxa kaliya sameeya oo aad u.
Taageer Qalabka More
Waxaa si fiican u la shaqeeya qalabka HTC iyo iPhone. Intaa waxaa dheer, waxa ay taageertaa Samsung, iPad, iPod taabto, LG, iwm
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Music, Photos, Video iyo SMS ka HTC si iPhone
1. Ku rakib Lugood , Si files wareejiyo oo ka iPhone, waxaa idinku waajib ah si loo hubiyo in Lugood la geliyo kombuyuutarka. 2. Bedelka xiriirada Cloud : HTC ayaa barnaamijka kala iibsiga iPhone nuqul karaan dhammaan dadka ay khuseyso, oo ay ku jiraan kuwa ku jira xisaabaadka, laakiin waxaad u baahan tahay inay la soo wareegto in xisaab adiga ku HTC telefoonka ama kiniin ah oo hagaagsan xiriirada waa inay. 3. Nokia (Symbian) telefoonka : Waqtigan xaadirka ah, version Mac ma taageeri dayanayaan si / ka Nokia (Symbian) phone xogta.
Tallaabada 1. Download iyo Orod HTC ay u Barnaamijka Transfer iPhone
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi barnaamijka on your computer oo abuurtaan. Connect aad HTC iyo iPhone la computer via fiilooyinka USB aad siday u kala horreeyaan.
Tallaabada 2. Dooro Phone inay kala iibsiga Phone
Ka dib markaas, doortaan Phone in Transfer Phone hab on furmo suuqa hoose. Markaasay aad arki doonaa in labada aaladaha aad ogaan Wondershare MobileTrans. Isticmaal Flip badhanka si ay u dejiyaan meelo xaqa ay u leeyihiin.
Tallaabada 3. Start in aad nuqulka Xiriirada, Calendar, Photos, Video, SMS, iyo xiriirada ka HTC si iPhone 6s / 6s Plus / 6/6 Plus / 5 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Hadda, bilowdo gujinaya Start Copy laga bilaabi karo habka kala iibsiga. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax wada hadal ah, kaas oo aad ku eegaan karo boqolkiiba bar horumarka kala iibsiga faylka. Hubi in labada qalabka lagu xidhayaa waqtiga oo dhan.
Qaybta 2. Talo Qaar ka mid ah si ay u gudbiyaan Apps si iPhone
1. Goobidda iyo Download Apps ka App Store
Tan iyo barnaamijyadooda socda ee iPhone leeyahay qaabab kala duwan ka files APK, ma tahay in aad loo ogol yahay in ay si toos ah barnaamijyadooda si iPhone wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadooda badan Android leeyihiin qoraalkii ay iPhone, sida Geedaha vs. Zombies 2. Xitaa haddii ay jiraan version iPhone jirin, waxaad weli heli bedelo badan. Sidaas darteed, baadhidooda iyo download barnaamijyadooda aad doonayay in Lugood App Store.
Wax ka badan One, barnaamijyadooda qaar ka mid ah si toos ah badbaadin xogta aad daruurta. Xaaladdan oo kale, xogta weli waxaa jiri doona marka aad isticmaasho app ku saabsan iPhone.
Qeybta 3: Sida loo Maamul iPhone ka dib markii Transfer
Lugood noqon karaa ka hore marka aad rabto in aad si ay u maareeyaan wax kasta oo aad iPhone. Sidaa daraadeed, aad u hagaagsan kartaa music, video, sawiro, Ebook oo dheeraad ah si aad u iPhone, iyo xogta gurmad aad iPhone oo ka dib loo soo celiyo.
Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) waa Saaxiibkii ah Lugood, taas oo aan samayn karo wax Lugood dhaco gaaban. Tusaale ahaan, waxay fududaysaa in aad si ay u gudbiyaan music, video iyo sawiro ka computer si aad iPhone la xafidaada kuwa hadda jira. Hoos waxaa ku qoran sifooyinka muhiimka ah. Akhri.
Feature 1. Transfer iPhone in Computer iyo Lugood. Waxaa ku wareejinaya audio iyo video in Lugood Library iyo ka badan si uu computer.
Feature 2. dhaqaaq warbaahinta ka Lugood / Computer si ay iPhone. Si ka duwan Lugood, ku dhaqaaqdo video iyo maqal ah si iPhone, laakiin hayaa faylasha in durba ay aad iPhone.
Feature 3. audio badalo iyo video. Kasta oo maqal ah leheyn iyo video aanay u soo noqon doonaa markii wareejiyo aad iPhone.
Feature 4. Abaabulaan xiriirada aad iPhone. Si fudud u gudbiyaan xiriirada iyo ka iPhone oo iyaga si fudud xaalkaa. (Version Windows oo keliya ayaa sameeya)
Sida loo badbaadi iPhone Text Messages
> Resource > iPhone > Music Transfer, SMS, Photos, Video, Calendar iyo Xiriirada ka HTC si iPhone